लामा नेतृत्वको टिम आरोहीहरुको हकहितमा काम गर्ने टिम हो : राजेन्द्र सापकोटा - Nepali Online News Media-shikharnews.com - shikharnews.com
लामा नेतृत्वको टिम आरोहीहरुको हकहितमा काम गर्ने टिम हो : राजेन्द्र सापकोटा
सन्तवीर लामालाई तपाईंहरुले अध्यक्षमा उठाउनुको कारण के हो ?
सन्तवीर लामा एउटा स्वतन्त्र र अनुभवी व्यवसायी हुन् । उनले स्वतन्त्र रुपमा आफ्नो व्यवसाय गरेका छन् । लामो समय नेपाल पर्वतारोहण संघको विभिन्न पदमा रहेर काम गरेको अनुभव छ । त्यसकारण उनको नेतृत्वमा हामीले एउटा स्वतन्त्र र अनुभवी टिम बनाएर निर्वाचनमा होमिने निर्णय गरेका हौं ।
हरेक मानिसको आ–आफ्नै राजनीतिक आस्था र विचार हुन्छ । कुनै व्यवसायीले कुनै राजनीतिक पार्टीप्रति आस्था राख्छ भन्दैमा उसले कुनै पनि संस्थाको नेतृत्वमा जानु राजनीतिकरण हुँदैन् । अहिले यहाँ के प्रचार गरिँदैछ भने जिम्बाजाङबु शेर्पा स्वतन्त्र उम्मेद्वार तर सन्तवीर लामा राजनीतिक पार्टीको उम्मेद्वार । यो मिथ्या आरोप हो, एजेन्डा बिहिनहरुको आरोप हो । हामीले व्यवसायी, आरोही र सबैलाई समेटेर स्वतन्त्र टिम बनाएका छौं ।
जसलाई निट नेपाल र नयाँ शक्ति नेपालले काँधमा हालेर हिँडेको छ । उ स्वतन्त्र उम्मेद्वार हुने । तर सन्तवीर लामा चाहिँ कुन कारण स्वतन्त्र उम्मेद्वार नहुने ? जिम्बाजाङबु शेर्पाले सन्त्तवीर लामाले भन्दा १० गुणाबढी राजनीतिक अगुवाई गरेका छन् । हिजो अध्यक्ष हुँदा सबैभन्दा बढी विवादित र अलोकतान्त्रिक निर्णय गरेका छन् । यो घाम जस्तै झर्लङ छ ।
जसले हामीलाई राजनीतिक रंग दलिदिएर भ्रमको खेती गर्न खोजेका छन् । उनीहरुसँग हाम्रो विरुद्ध प्रचार गर्ने अरु एजेन्डा छैन् । किनकि उनीहरु एजेन्डा विहिनहरुलाई नै एनएमएको नेतृत्व तहमा पुर्याउनुपर्छ भनेर हिँडेका छन् ।
उसो भए सन्तवीर नेतृत्चको प्यानललाई व्यवसायीले किन चुन्ने ?
प्रमुख कारण एनएमए कसैको ससुरालीबाट ल्याएको दाइजो होइन, आलोपालो भागबन्डा गरेर बाँडीचुडी खाइरहने । यसपटक देखि हामी एनएमएमा बाँडीचुडी खाने कुप्रथाको अन्त गर्न चाहन्छौं । म फेरी भन्छु सन्तवीर लामा एक अहिले एनएमएको अध्यक्ष भइसकेपछि पुन दोहो¥याएर अध्यक्ष बन्नुहुन्न् ।
दोस्रो यसपटक हामीले इतिहासमा पहिलो पटक समावेशी टिम निर्माण गरेका छौं । शेर्पाहरुको कल्याणकारी कोष स्थापना गर्ने, एनएमएलाई अन्तर्राष्ट्रिय अल्पाइन क्लबको रुपमा विकास गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय स्पोर्टस क्लबहरुसँग सहकार्य गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अल्पाइनिष्ट सम्मेलन नेपालमा आयोजना गर्ने, एनएमएभित्र भएका अनियमितता र अपारदर्शी खेलको अन्त गर्ने हाम्रो मुख्य एजेन्डा हो । साथै विदेशमा गएर अनावश्यक करोडौ रुपैयाँ खर्च गर्ने संस्कारको अन्त र सगरमाथाको नाम्चे लगायतका स्थानमा मौसम पूर्वानुमान प्रणाली जडान गर्ने हाम्रो एजेन्डा रहेको छ ।
यसका अलवा हामी यस क्षेत्रका व्यवसायी र सरोकारवाला निकायहरुसँग सहकार्य गर्दै नेपालको पर्वतीय पर्यटनको विकासमा लामा नेतृत्वको टिम लाग्ने छ ।
यो निर्वाचनलाई पिक खोस्ने र बचाउने बीचको लडाई हो भनेर भनिएको छ नि ? अझ त्यसमा पनि लामा नेतृत्वको प्यानललाई त पिक खोस्नेहरुको प्यानल भनेर पनि भनिन्छ ?
यो चाहिँ सरासर झुटको खेती हो । मैले अघि पनि भने एजेन्डा विहिनहरुले लामाको प्यानलले जित्ने भएपनि गरिएको अनावश्यक हर्कत मात्र हो । सरकारले आरोहीहरुको तालिम, कल्याणकारी कोष निर्माण र अल्पाइनिष्टहरुसँग सहकार्य गरेर काम गर्नका लागि एनएमएलाई पिक सञ्चालनको अनुमति दिएको हो ।
यो खोस्ने भन्ने कुरा किमार्थ हुन सक्दैन । सन्तवीर लामा नेतृत्वको टिम सबैभन्दा बढी आरोहीहरुको हकहितमा काम गर्ने टिम हो । किनकि त्यो टिममा अनुभवकी अनुहारहरु मात्रै छन् ।
विगतमा एमालेकै पर्यटन मन्त्री हुदाँ पिक खोस्ने प्रयास भयो भन्ने कुरा छ त्यो सरागत गलत हो । एमालेको पर्यटन मन्त्री भएपनि प्रधानमन्त्री कांग्रेसका तत्कालिन सभापति सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो, अर्थमन्त्री पनि कांग्रेसकै रामशरण महत हुनुहुथ्यो । प्रधानमन्त्रीले चाहेको खण्डमा मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न सक्छ । प्रधामन्त्री मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्ष हुन । पुरुषोत्तम पौडेल र राधा ज्ञवालीलाई कोइरालाले नै मन्त्रीबाट बरखास्त गरिदिएका हुन् । अनि राम्रो गरे हामीले गरेको भन्ने नराम्रो गरे अरुलाई औला देखाउने ? गलतलाई गलत र सहीलाई सही भन्न नसक्नेले के व्यवसायीको हकहितको कुरा गर्ने ?
अर्को कुरा त्यो बेला सन्तवीर लामा पिक फिर्ता ल्याउने अभियानको अभियान्त हुन । अहिलेका अध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पा त्यो बेला विदेश भ्रमणमा मस्त थिए । लामाले अड्डा, अदालत धाएर मुद्दा मामिला गरेर पिक फिर्ता ल्याउन लडेका छन् ।
हामीले अहिले पनि भनेका छौं । पिक खोस्ने काम कदापी सम्भव छैन । हामी त अहिलेको १८ वटा मात्र होइन । थप भर्जिन पिकहरु सञ्चालनको जिम्मा एनएमएलाई दिनुपर्छ र तिनीहरुको आवश्यक प्रचार–प्रचार गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौ । त्यो अभियान पनि हामी छिटै थाल्छौं ।
अरु बेला पर्यटकीय संघसंस्थाहरुमा राजनीति हुनुहुँदैन भन्ने तपाईहरुले नै एनएमएलाई राजनीतिको भुङग्रोमा हालिदिनुभयो हैन ?
हरेक आफ्ना कुरा राख्ने स्वतन्त्रता छ । तर बुझ्नेले बुझिदिनुप¥यो । कसले सही गरेको छ र कसले गलत गरेको छ । एनएमएमा सहमतिय नेतृत्व चयनका लागि हामीले अन्तिम समय सम्म प्रयास गरेकै हो । र विगतको सहमतिहरुलाई कार्यान्वयन गर्दै अघि जाउ भनेको हो । सोही अनुसार हामीलाई हुन्छ भन्ने आश्वासन पनि दिइएको हो । तर हामीसँग लाजले वार्ता गर्न नसकेर केही साथीहरु आफ्नो सुरुले हिँड्नुभयो । त्यसपछि हामीले सन्तवीर लामाको नेतृत्वमा टिम बनाएर निर्वाचनमा उभिन बाध्य भयौं ।
अहिले हामीलाई जसले राजनीतिको आरोप लगाउनुभएको छ । उहाँहरु नै राजनीतिक हुनुहुन्छ । सन्तवीर लामा कहाँ कुन ठाँउबाट कुन पार्टीबाट संसद उठेका व्यक्ति हुन् । म फेरी भन्छु सन्तवीर लामाको टिम स्वतन्त्र र समावेशी टिम हो । यसलाई जिताउनु भनेको एनएमएलाई एक सशक्त संस्थाको विकास गर्नु हो ।